China kuAustria-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Europe yeMediterranean uye Makungwa Matema>China kuAustria
Kuendesa kubva kuChina kuenda kuAustria
Kunyangwe basa rekutakura kubva kuChina kuenda kuUK rakura zvakanyanya mazuva ano, SHL inogona kugara ichiedza kuita kuti zvinhu zvigadzikane kushanda zviri nani, kunze kwemhinduro yakanakisa uye nekushandira kwakanaka, tinokwanisawo kupa mitengo yekukwikwidza kubva kuChina kuenda kuAustria.
SHL ichabatsira yako kusarudza yakanyanya nzira yekutumira nzira, yemakwikwi yekutumira mutengo uye yakanakisa yekufambisa makambani kubatsira yako yekuendesa kubva kuChina kuenda kuAustria.
China Railway Express kubva China kuenda kuAustria
Kutakura Mhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuAustria
Kune dzakawanda ndege dzekune dzimwe nyika dzakakosha muAustria uyezve kune zvinhu zvakawanda zvekutakura kubva kuChina kuenda kuAustria nendege, SHL inogona kupa mhepo yemakwikwi yakakura kwazvo iyo yakadzikira pamusika kune mutengi wedu zvichienderana nehurongwa hwako hwekuda.
Ro-Ro / Kupwanya Bulk Kutumira kubva kuChina kuenda kuAustria
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yeiyo chaiyo michina, mota uye zvinorema michina kubva China kuenda kuAustria Tinogona kupa imwe kumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kuendesa Gungwa Kukutakura kubva kuChina kuenda kuAustria
SHL ine huwandu hwakasimba hwekutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuFelixstowe, Southampton, nezvimwewo kuitira kuti isu tigare tichiwana zvakanaka rwendo rwegungwa kuenda kuAustria port kubva kune vakawanda vanotakura, uye isu tinogona kuve nechokwadi chekuisa nzvimbo yemumidziyo kunyange mumwaka wepamusoro.
Door to Door Service China kuAustria
Pamusuwo pasuo nesuo, SHL inogona kuita nekukurumidza kumisikidzwa kuAustria uye kuendesa zvinhu zvekutumira kunzvimbo yekuchengetera yevatengi yedu zvakanaka, Kunze kweizvi, kana uri wega, SHL ine kambani yekutengeserana iyo ingave inobatanidza paBL uye inokubatsira iwe kutumira kutumira zvinhu zvinobudirira.
China iri chinhambwe chinosvika 7,775 km kubva kuAustria asi kuyambuka chinhambwe ichi kunogona kutora nguva yakareba nekuda kwenzira dzegungwa dzinotsanangurwa nemiviri yemvura.
Asati asarudza iyi nzira yekutumira, iye / iye anofanira kunge achinyatso ziva neakasiyana madoko muChina neAustria.
Main Airports muAustria
Mhando dzekutumira kubva kuChina kuenda kuAustria
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kutumira kubva kuChina kuenda kuAustria?
Nekuti iwe unoda chiteshi chinogona kukubatanidza iwe zvakananga neAustria
Ndeipi nguva yakazara inotorwa kubva kuChina kuenda kuAustria?
Muchidimbu, iwe unogona kukonzera pane izvi zvese kuti uwane nguva yakakwana iyo inotora kubva kuChina kuenda kuAustria
Vakadaro vatakuri vemitoro vanoziva mitemo nemirairo inotungamira kupinza kubva kuChina kuenda kuAustria